yakajeka acrylic sheet Vagadziri & Vatengesi - China yakajeka acrylic sheet Factory
yepamusoro yepamusoro yakajeka acrylic mapaneru
Acrylic Panel chinhu chakajeka chepurasitiki chine simba rakatanhamara, kuomarara, uye kujekesa kwemaziso. Acrylic jira rinoratidzira girazi-senge hunhu - kujekesa, kupenya, uye kujekesa - asi pahafu yehuremu uye kazhinji kacho kushorwa kwegirazi.
Bvisa Acrylic Sheet iri ACRYLIC, inowanzozivikanwa se "inonyanya kurapwa plexiglass sheet". Iye chigadzirwa chemakemikari. Iyo kemikari zita "PMMA", iri yepropylene doro. Mune indasitiri yekushandisa, acrylic mbishi zvigadzirwa zvinowanzoonekwa muchimiro chezvimedu, mahwendefa, pombi, nezvimwe.
Yakajeka Acrylic Sheets ine yakajeka kujekesa, kristaro yakajeka mushure mekukwenenzverwa, mwenje transmittance inosvika 93,4% .High yakavhenekerwa uye yakatsetseka nzvimbo pasina zvekunze nyaya; yakanaka yekunze kushora uye tembiricha kuramba pasina kupera uye kudzikama;
Kunaka kwemamiriro ekunze kusagadzikana: kuchinjika kune yakasikwa nharaunda, kunyangwe kwenguva yakareba muchiedza chezuva, mhepo nemvura hazvizoshandure zvivakwa, anti-kukwegura zvivakwa, zvinogona zvakare kuve zvakachengeteka kushandisa kunze.
Aquarium acrylic machira akakandwa akajeka acrylic sheet zvakare.asina kujairika iyo yakawanda gobvu pamusoro pe15mm.